EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂-၅)
ပဲခူးမြို့နယ်တွင်း ပေါက်တောကျေးရွာတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ် နေအိမ် (၁၉၂) လုံး ပျက်ဆီး
လပွတ္တာမြို့ပေါ် ဆေးရုံပြန်ဖွင့်ရေး ဒုတိယအကြိမ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်
အရာတော်စပါးခင်းများ ပိုးကျပျက်စီး၊ ထောက်ပံ့ကြေး မရသူများ
ပုဂံရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်နေရာများကို မှတ်တမ်းတင်မည်
အင်အားကြီးလာသည့် လူဆိုးဂိုဏ်းဝင်များကို အမေရိကန်အာဏာပိုင်များ ဖမ်းဆီး
တောင်ကိုရီးယားတွင် ရထားနှစ်စီးတိုက်၊ လူ ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ
မြစ်ဆုံ ရပ်ဆိုင်းရေး လမ်းလျှောက်သည့်အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားရောက်ရန် မိုင် ၃၀သာလို
RCSS/SSA တပ်မှ ပစ်ခတ်၍ “ဝ” တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး သေဆုံးခြင်းမှာ အောက်ခြေ ပြသနာဟု “ဝ” သဘောထား
ကျွန်တော်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးနီးပါး အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ရန်လိုလားဟု သူရဦးရွှေမန်းပြော
ကျေးလက်ဒေသ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှု မြို့ပြများနည်းတူ ဖြစ်လာ
Posted: 02 May 2014 07:58 AM PDT
ကမ္ဘာတဝန်း ချိတ်ဆက်ပြီး ဝက်ဘ်ကမ် တွေကနေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာ ပုံတွေ ရယူပြီး လူတွေကို ငွေညှစ် အကျပ်ကိုင်တဲ့ လူပေါင်း ၆၀ နီးပါး ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ကို ဖိလစ်ပိုင်မှာ ရဲတွေက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့ဟာ လူမှုကွန်ရက် တွေကို သုံးပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို ဝက်ကမ်တွေကနေ တဆင့် ပို့ပေးလာအောင် လူတွေကို ဖျားယောင်း တိုက်တွန်း ခဲ့ကြတယ်လို့ Interpol နိုင်ငံတကာ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့
Posted: 02 May 2014 04:26 AM PDT
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပေါက်တောကျေးရွာတွင် ၁-၅-၂၀၁၄ ရက်နေ့ ညနေ(၆)နာရီ အချိန်ခန့်က လေပြင်း တိုက်ခတ်ပြီး မိုးများသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ရာ မူလတန်းလွန် စာသင်ကျောင်း အပါအ၀င်ပျက်စီးသွားသော နေအိမ်(၉၅)လုံး နှင့် အိမ်ခေါင်မိုး ပျက်စီး သွားသော နေအိမ်(၉၇)လုံး စုစုပေါင်း(၁၉၂)လုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်မီးကျောက်တိုင်များ ပြိုလဲသွား ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါကျေးရွာသို့ ပဲခူးတိုင်းေ
Posted: 02 May 2014 04:18 AM PDT
ရန်ကုန်၊မေ၂ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသော အချက်များအရ မိဘမဲ့ဂေဟာများတွင် ရောက်ရှိနေသော ကလေးသူငယ်များသည် မိသားစု၏ ချစ်ခင်ကြင်နာ မှုများကို မရရှိရုံမက ၄င်းတို့အတွက် အန္တရာယ်များပင် ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ယူနီဆက်ကပြောသည်။ မေလ၂ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ စင်ထရယ်ဟိုတယ်တွင် ပြု လုပ်ခဲ့သော လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Myanmar
Posted: 02 May 2014 04:15 AM PDT
လပွတ္တာမြို့ပေါ်ရှိ ဆေးရုံပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက် ဒေသခံ ၇၀၀ ကျော်လောက်က မေ ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ ဒုတိယအကြိမ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မယ်လို့ လပွတ္တာ ဒေသခံ ဦးသိန်းဌေးက ပြောပါတယ်။ “မတ်လထဲမှာ တခေါက်ပြပြီးပြီ။ သက်ဆိုင်ရာက ဘာမှလုပ်မပေးလို့ တရားဝင်စာတင်ပြီး အခုထပ်ပြတာပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။ လပွတ္တာမြို့ပေါ်ရှိ ဆေးရုံကို နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး နောက်ပိုင်း သုံးမိုင်မြို့သစ်မှာ ခုတင် ၂၀၀ ဆေးရုံအသစ် တည်ဆောက်ကာ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ
အရာတော်မြို့နယ်က စပါးခင်းတွေ ပိုးကျပျက်စီးလို့ အစိုးရက ထောက်ပံ့ကြေး ပေးပေမယ့် မရရှိသူတွေက အများစု ဖြစ်နေပါတယ်။ အရာတော်မြို့နယ် နေရာခင်းကျေးရွာက စပါးခင်းတွေမှာ စစ်ပိုးတွေ ကျပြီး စပါးခင်းပျက်ခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရက တဧက မျိုးစေ့ဖိုး ၄၆၅၀၀ ကျပ် ထောက်ပံ့ကြေးပေးခဲ့ရာမှာ အများစုက မရရှိတဲ့အတွက် အရာတော်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးစီးပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ အရာတော်မြို့နယ်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁ လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းဖြင့် အသုံးမပြုရေး မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူ လယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (Agriculture and Farmer Federation of Myanmar-AFFM) ၏ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို လွှတ်တော်မှတင်ပြကာ အစိုးရကို ဖိအားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါသမဂ္ဂ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးကြည်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။ ညီလာခံကို
Posted: 02 May 2014 04:10 AM PDT
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ညောင်နှစ်ပင်၊ ကြာဂန်သင်္ချိင်းအနီးရှိ အသေးစားသားရေစက်ရုံ ၀န်ထမ်း ၃၃ ဦး အစာအဆိပ်သင့်ကာ မေလ ၂ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၄၀ မိနစ်ခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည်ဟု ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာဒေါ်သန်းလှက ပြောသည်။ "သူတို့က သားရေစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေလို့ သိရပါတယ်။ စက်ရုံက ၀န်ထမ်းတွေကို မနက်တိုင်း နံနက်စာအဖြစ် ထမင်းကို ပဲပြုတ်နဲ့ကြော်တာတို့
Posted: 02 May 2014 04:06 AM PDT
မန္တလေး၊ မေ ၁ မြန်မာ့သမိုင်း ဖြစ်စဉ်များနှင့် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို လေ့လာထိန်းသိမ်း လိုသူများနှင့် ရှေးဟောင်း ပညာရပ်များကို စိတ်ပါဝင်စားသူများဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်း သုတေသနပညာ အသင်းသည် ပုဂံဒေသရှိ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆက်စပ်သည့် ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် နေရာများကို မှတ်တမ်းတင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးသူရအောင်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါအသင်း၏ ပထမဆုံး
Posted: 02 May 2014 04:03 AM PDT
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အင်အားကြီးထွား လာနေတဲ့ ဆူရင်ညို (Surenos) လူဆိုး ဂိုဏ်းဝင်တွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံ တ၀န်း အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေ လိုက်လံဖမ်းဆီး ခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန်မြို့ကြီး ၁၇၉ မြို့မှာ တလကြာ စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့တာမှာ ဂိုဏ်းသား စုစုပေါင်း ၆၃၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီလို့ ဖမ်းဆီးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လူဝင်မှုနဲ့ အကောက်ခွန် ထိန်းသိမ်းရေး အာဏာပိုင်တွေက ပြောဆိုပါတယ်။ USဆူရင်ညိုလူဆိုးဂိုဏ်းဟာ
Posted: 02 May 2014 04:02 AM PDT
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက မြေအောက်ရထား နှစ်စီး တိုက်မိပြီး လူ ၁၀၀ ကျော်လောက် ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား အရေးပေါ်ဌာနက ပြောပါတယ်။ ဆိုးလ်မြို့အရှေ့ဘက်က ဘူတာရုံတခုမှာ ရပ်ထားတဲ့ ရထားတစီးကို တခြားရထားတစီးက နောက်ကနေ အရှိန်နဲ့ ၀င်တိုက်ခဲ့တာလို့ တောင်ကိုရီးယားယွန်ဟပ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ရထားတိုက်မှု ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ လူတွေ ထိခိုက်သေဆုံးမှု အသေးစိတ်
Posted: 02 May 2014 03:58 AM PDT
ချင်းမိုင်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများသည် မေလ ၂ ရက်တွင် ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် နမ္မတီးမြို့နယ်ခွဲတွင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ရောက်ရန် မိုင် ၃၀သာလိုတော့သည်ဟု ဦးဆောင်သူ ကိုရဲထွဋ်ခေါင်က ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၃ ရက်မှစတင် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့ မရောက်မီ ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်း
Posted: 02 May 2014 03:56 AM PDT
စံခလပူရီ၊ မဇ္ဈိမ။ ။ “ဝ” တပ်ဖွဲ့မှ စစ်သည်တစ်ဦး သေဆုံးသည်အထိ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တပ်မတော်(RCSS/SSA)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မှုကို အောက်ခြေအဆင့် ပြသနာဟုသာ သထောထားသည်ဟု “ဝ” ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်မြင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ “ဒါကတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စ၊ အောက်ခြေအဆင့် ပြသနာပါ၊ ဒီကိစ္စ ဆက်ပြီး မကြီးထွားသွားအောင် မပြန့်ပွား
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၃၀ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာမွေမြို့နယ်၊ ကျိုက္ကဆံလမ်းမပေါ်ရှိ ယခင်ကျောက်မြောင်း ယာယီဈေး ဖွင့်ခဲ့ရာ မြေကွက်အား အာဏာရကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်နှင့် စည်ပင် ကော်မတီဝင်အချို့၊ တာမွေ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေ တို့ ပူးပေါင်းကာ အခိုင်အမာ ချုပ်ဆိုထားသော စည်ပင်မြေငှားစာချုပ်ပါ အမည်ပေါက် ကာယကံရှင်ကို အကြောင်းကြား၊
Posted: 01 May 2014 11:14 PM PDT
မော်လမြိုင်၊ မေ ၁ မွန်လူငယ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှာမှု၊ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွင် အနှစ်သာရ ရှိရှိ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်လှုပ်ရှားသင့်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် နိုင်တလညီက တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုက်သည်။ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၃ ရက်နေ့ထိ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ သာသနာ ၂၅၀၀ ကျောင်းတွင် ကျင်းပသည့် ပထမဆုံးအကြိမ် မွန်လူငယ်များကွန်ဖရင့် (Mon Youth Conference) တွင် နိုင်တလညီက မွန်လူငယ်များကို
Posted: 01 May 2014 11:13 PM PDT
ကျိုင်းတုံ၊ မေ ၁ မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့တွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းကို ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ရာ သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ငန်းရှင်ငယ်များ ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှုကတ် Individual Trading Card (ITC) များကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၇ သာသနာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမိုးဇော်ရွှေ၏ ဖုန်းအတွင်းမှ ဓမ္မာစရိယ မေးခွန်းတွေ့ ရှိပြီး မေးခွန်း ပေါက်ကြားမှုကြောင့် သမ္မတရုံးမှ ရာထူးရပ်နား၍ ကော်မတီဖွဲ့ စစ်ဆေးလျက် ရှိဟု မြောက်ဥက္ကလာ ဓမ္မရောင်ခြည် ဆရာတော်က ဧပြီ ၂၆ ရက် မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ဓမ္မာစရိယ မေးခွန်း ပေါက်ကြားမှုကြောင့် သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမိုးဇော်ရွှေနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(
Posted: 01 May 2014 10:59 PM PDT
သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတွေကို သမ္မတလူကြမ်းအဖွဲ့ ရေးတဲ့အခါကျတော့ ခံနိုင်မယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး . . . ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းကြီးတွင် အသင်းကြီး၏ နှောင်းပိုင်းကာလမှသာ ဗဟိုနာယကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သူရရွှေမန်းပါဝင်လာခဲ့ခြင်း၊ အသင်းကြီး ဖျက်သိမ်းချိန်အထိ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့တွင် မပါဝင်ခြင်း . . . ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် ဧရာဝတီတိုင်း (အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်) တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်
Posted: 01 May 2014 10:50 PM PDT
ရန်ကုန်၊ မေ ၁ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပြုလုပ်မည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီမှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ဇွန်လအတွင်း အပြီးသတ် ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်က ပြောကြားသည်။ NLD ပါတီ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များ အားလုံးသို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ယာယီေ
Posted: 01 May 2014 10:48 PM PDT
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးနီးပါးက ပြင်ဆင်ရန်လိုလားကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားသည်။ မေလ ၁ရက်က ကျောက်ဖြူ မြို့တွင် ပြုလုပ်သော ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံ ပိတ်ပွဲ၌ သူရဦးရွှေမန်းက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် နိုင်ငံသားများနည်းတူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကပါ လိုလားကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ‘‘နိုင်ငံသားများ
Posted: 01 May 2014 10:40 PM PDT
ကျောက်ဖြူ၊ မေ ၁ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့တွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များက တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များကို ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးအတွက် ခွဲတမ်း သတ်မှတ်ပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံတွင် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ယင်းအပြင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်များကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များက တိုက်ရိုက်ေ
Posted: 01 May 2014 10:34 PM PDT
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၃၀ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ ယခင်က မြို့ပြတွင်သာ အဖြစ်များခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ ကျေးလက်ဒေသများ၌ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့် မြို့ပြဆန်လာခြင်းတို့ကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ မြင့်မားလာကာ မြို့ပြနှင့် တန်းတူဖြစ်လာကြောင်း ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးဌာနမှ ဒေါက်တာမာလာစိုးက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ြေ
Posted: 01 May 2014 10:32 PM PDT
ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီဘဲ အလုပ်အချိန်ပို အဓမ္မခိုင်းစေခဲ့သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ၅၀ ကျော် အား ခံဝန်ကတိလက်မှတ်ရေးထိုး၍ သတိပေးထားကြောင်း အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစိစစ်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ပြောသည်။ မြန်မာနှစ်ကူးကာလရုံးပိတ်ရက်ကြောင့် စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံတို့တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်ချိန်ထက်ကျော်လွန်၍ အချိန်ပိုအလုပ်များ အဓမ္မခိုင်းစေမှုများ ရှိသောကြောင့် အစိုးရက
Posted: 01 May 2014 10:28 PM PDT
ရန်ကုန်၊ မေ ၁ အလုပ်သမားနေ့တွင် လုပ်သားများကို အနားပေးခြင်း မရှိသည့် စက်ရုံများကို အဆိုပါနေ့တွင် ပိတ်ပေးရန် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးထင်အောင်က ပြောကြားသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၆ ရပ်ကွက်ရှိ အောင်မြေသာယာ ဘောလုံးကွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် (FTUN) မှ ပြုလုပ်သည့်
Posted: 01 May 2014 10:11 PM PDT
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၃၀ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မေလအတွင်း အပူလှိုင်း ဖြတ်သန်းမှုအစား မုတ်သုံမ၀င်မီ ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိသော မုန်တိုင်းငယ်များသာ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု နေပြည်တော် မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုမှာ မုတ်သုံမ၀င်မီနှင့် မုတ်သုံထွက်ပြီး အချိန်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိပြီး မုတ်သုံမ၀င်မီ မေ၊
Posted: 01 May 2014 10:04 PM PDT
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းက ချောက်မြို့မှာ အပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ အတွက် ၄ ရက်အတွင်းမှာ လူ ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံဦးစိုးမြင့်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ “အပြင်ချိန်မြင့်တော့ နဂိုမကျန်းမာတဲ့ သူတွေ၊ အရက်သောက်တဲ့ သူတွေ အဲဒါတွေ သေကြပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျော်တွေနဲ့ ကျန်တာတွေတော့ ၆၀ ကျော်တွေပါ။” ချောက်မြို့မှာ ဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ဒေါက်တာ ဦးမောင်မောင်ကျော်ကတော့ အပူချိန်ကြောင့် ဖြစ်တတ်တာတွေနဲ့ သူကြုံတွေ့တာကို